Meizu M6s: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်လွှတ်တင်မှုအတည်ပြုချက် | Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | Meizu
Meizu သည်စျေးကွက်တွင်ပုံမှန်တိုးတက်နေသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖုန်းများနှင့်ချန်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လူသိအများဆုံးမဟုတ်ပါ။ နောက်တဖန်လုပ်ရန်တစ်ခုခု အသစ်က Mid-range ကို device ကို သူတို့ဘာတွေတင်ပြနေကြတယ် ဒါဟာ Meizu M6s အကြောင်းပါအရာအားလုံးကိုအလယ်အလတ်တန်းစားအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခု။
ကုမ္ပဏီ၏ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်မှုကြောင့်လူသိများပြီးဖုန်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သည်။ ဒီဖုန်းအသစ်ကိုကတိပေးတဲ့အရာကလည်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ The ဒီ Meizu M6s ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ. ဖုန်းမှဘာများမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်ဟာဒီ ၂၀၁၈ အတွက်ဖုန်းအမျိုးမျိုးကိုသက်တမ်းတိုးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအဲဒါကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်၊ ​​ဒီဖုန်းဟာဒီသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုပြသတဲ့ပထမဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ စျေးကွက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုမြင်တွေ့နေရသောကြောင့်ဖုန်းသည် 18:9အချိုးအစားဖြင့်မျက်နှာပြင်မရှိသည့်မျက်နှာပြင်ကိုရွေးချယ်သည်။
ဤရွေ့ကား Meizu M6s ၏အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်:
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Flyme 7.1.2 အောက်ရှိ Android 6.2 Nougat
ဖန်သားပြင်: ၅.၇ လက်မ HD + (5,7 x 1.440 pixels)
Processor ကို: 7872GHz မှာ Exynos 142nanometers
internal memory: 32 GB ကို / 64 GB ကို
နောက်ကင်မရာ: aperturef/ 16 နှင့်အတူ 2.0 အမတ်
ဘက်ထရီ: အလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းနှင့်အတူ 3.000 mAh
အခြားသူများကို: Dual SIM LTE၊ WiFi၊ Bluetooth၊ လက်ဗွေဖတ်ခြင်း
တယ်လီဖုန်းသည်စျေးကွက်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းများထဲမှအလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည် 18:9အချိုးနှင့်အတူမျက်နှာပြင်။ ဒါ့အပြင်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် device ရဲ့ home ခလုတ်လည်းပျောက်သွားတယ်။ ဒီတော့ဒါကဖန်သားပြင်လုံးလုံးထိတွေ့မှုရှိတယ်။
ဒီ Meizu M6s ဗားရှင်းနှစ်မျိုးကိုဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်ချိတော့မှာပါ။ တစ်ခုမှာ internal memory 32 GB ရှိပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ 64 GB ပါ။ သိုလှောင်မှုပမာဏ 32 GB ရှိသည့်ဖုန်း၏ဗားရှင်းကို ၁၂၅ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်။ 64GB သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ device ကိုဗားရှင်းနေစဉ် ယူရို ၁၅၀ လောက်ကုန်ကျမယ်.
ဖုန်းကိုစုစုပေါင်းအရောင်လေးမျိုးဖြင့်ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှဝယ်ယူနိုင်သည် (အနက်ရောင်၊ ငွေ၊ ရွှေနှင့်လျှပ်စစ်ပြာ) ။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုတရုတ်ထက်စျေးကွက်များတွင်ပိုမိုရောင်းချရန်စီစဉ်နေသည်။ ဒါကြောင့်လအနည်းငယ်အတွင်းဥရောပကိုရောက်သင့်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Meizu » Meizu M6s: အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ